အဆိုပါအိပ်ခန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အများစုကိုဖြုန်းရာအရပ်ကိုဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အလှပြင်ဆင်ရေးမှကြွလာသောအခါသေးလည်းအများဆုံးလျစ်လျူရှုခံရဖို့လေ့. ယနေ့ခေတ်, ပိုက်ဆံသိသိသာသာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ! ဤတွင်မှာအားလုံးငွေမရှိသောနှင့်သင်၏အာကာသကိုတက်တောက်ပတချို့ကြီးမြတ်အကြံပေးချက်များများမှာ!
1.ပွောငျးလဲ! သစ်လတ်ဆတ်တဲ့အစီအစဉ်အမြဲအခန်းတခန်းသစ်ကိုခံစားရစေသည်. တစ်ထောင့်ဖြတ်ပေါ်တွင်သင်၏အိပ်ရာနေရာချသင့်ရဲ့ပရိဘောဂများအတွက်သစ်ကိုထောင့်ကြိုးစားရန်မစိုးရိမ်, သို့မဟုတ်ပင်ညာဘက်အခန်း၏အလယ်၌!
2. scarves အဘို့သင့်အံဆွဲရှာရန်, tablecloths, သင့်ရဲ့အရောင်အစီအစဉ်ကိုချီးမွမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်ပင် pillowcases.
သင်ပြီးသားတစ်ခုတျထိပ်တန်းသို့မဟုတ်သင့်ညစဉ်ရဲ့အစွန်းပျော့ပြောင်းမှပိုင်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုသုံးနိုငျသ, သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းအိပ်ရာ၏ခြေကိုအုပ်စိုးတော်တော်လေး shawl တင်.. သငျသညျပြီးသားရှိပါက ခေါင်းအုံးပစ် သင့်ရဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာ (သငျသညျမကျင့်လျှင်, ဒါကြောင့်အခြားအခန်းကနေသူတို့ကိုခိုးယူဖို့အချိန်င်!) သင်သည်လည်းအသစ်တစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်များအတွက်ခေါင်းအုံးပတ်ပတ်လည်ကဤပိတ်ထည်ခြုံနိုင်, ရုံ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု pin ကို ဒါကြောင့်နောက်ကျောမှာ.
Jelly Bean ကိုစက်ရုံ (Sedum rubrotinctum) (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
3. တစ်ဦး Add စက်ရုံ သင့်ရဲ့အခန်း. သင့်ရဲ့လက်ရှိအပင်တစ်သင့်ရဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာပျြောရှငျဖြစ်လိုလျှင်ကြည့်ဖို့သငျ့အိမျပတ်ပတ်လည်ကြည့်ရှုလော့, ထို့နောက်အဲဒီမှာရွှေ့! သငျသညျနေရာပြောင်းရွှေ့များအတွက်အပင်တစ်ပင်အဆင်သင့်ရှာမနိုင်လျှင်, တဦးတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါ! အများစုကအပင်ခုတ်ရှမှစိုက်ပျိုးနိုင်သည်, သင့်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်စေ တော်ပါတယ်, တဦးတည်းမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုသင်ဖြတ်ကြကုန်အံ့စေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်ပင်အချို့ပြင်ပတွင်အပင်.
အိုင်ဗီနှင့်များစွာသောအရိပ် groundcover အလွန်ကောင်းသောတော်ပါတယ်များမှာ. သင်ပင်သင့်ရဲ့ကလေးဘဝတစ်နည်းနည်း relive နှင့်တစ်ဦးဖြတ်အာလူးကြီးထွားနိုင်ပါတယ်, နာနတ်သီး, တစ်ဦးအဖြစ်တော့အတွက်သို့မဟုတ်မုန္လာဥနီထိပ်! ကွန်တိန်နာများအတွက်, သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်သို့ကြည့်ရှု ကွောငျအိမျ.
အဟောငျး teapots နှင့်ခွက်, ဖန်ခွက်ဖလား, ပင်မုန့်ဖုတ်ဟင်းလျာများထူးခြားသောကွန်တိန်နာများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်.
4. သင့်ရဲ့အခန်းအမှတ်တရ Add. သူတို့လာမယ့်ငါ့အရာဘေးရန်သေးငယ်ခဲ့ကြသောအခါငါငါ၏သားသမီးတို့သည်အသီးအသီး၏ဓာတ်ပုံတပုံစောင့်ရှောက်, ထိုသို့အစဉ်အမြဲငါ့ကိုပြုံးစေသည်. ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ဆွဲထားအကြောင်း မင်္ဂလာဆောင်မကျြနှာဖုံး အ headboard မှ, သို့မဟုတ်သင့်လိုက်သည် မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်ကြားချက်ကို သို့မဟုတ်ဟောင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာအက္ခရာများ?
5.ရနံ့ Add. သငျသညျအိမျတျော၌မဆို potpourri သို့မဟုတ်နံ့သာပေါင်းကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, အချို့သောလိမ္မော်ရောင် peels တက်ဖြတ်အခြောက်မှခွင့်ပြု, ထို့နောက်သင်သည်သင်၏ဗီရိုထဲမှာရှိချိုသောသမျှနံ့သာမျိုးနှင့်အတူရောထွေး. (ကိုယ်ကသာတစ်ဦးဖြစ်တော့ကြာ, သစ်ကြံပိုးကြိုးစားကြည့်ပါ, ဂျင်း, သို့မဟုတ် allspice ။) အမြင်ကြည်လင်စေရန်နှင့်လာအောင်နှိုးဆွရန်သင့်အခန်းတစ်ပွင့်လင်းပန်းကန်ထဲမှာသင့်ရဲ့ potpourri Place!
နောက်ပိုင်းနွေရာသီအတွက်, သင့်ရဲ့အခန်းထဲမှာပန်းပွင့်ကိုထည့်သွင်းဖို့သေချာပါစေ, သင်သည်သင်၏ခြံအတွက်နှင်းဆီပန်းသို့မဟုတ်အခြားရနံ့ပန်းပွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြပါလျှင်, လမ်းဘေး daisy လည်းကြီးမြတ်အနံ့နိုင်!
အနည်းငယ်သေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကို, ပိုက်ဆံပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိ, နှင့်တစ်ဦးပိုမိုကောင်းမွန်, သငျသညျအသီးအသီးနေ့ကစတင်အဆုံးသတ်ဘို့ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရာအရပျ!
81947	48 အိပ်ခန်း, စီးပွားရေး, ပန်း, ဉယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး, တော်ပါတယ်, စက်ရုံ, စျေးဝယ်, ခေါင်းအုံးပစ်
← ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်းသတ်သေအန္တရာယ် Reduce ရနိုင်ပါသလား! တောခွေး’ ညည်းတွားမြည်တမ်းကွန်ပျူတာအားဖြင့် ID'd နိုငျ →